LISITRY NY ALIKA MANGA VOLO - ALIKA
Ity i Shaka the Husky Siberia manodidina ny 45 lbs (45 kg). Manana volom-borona mena sy fotsy ary manga mifanentana amin'ny masony izy.
Ity pejy ity dia mitanisa ireo karazana alika afaka manana maso manga toy ny alika olon-dehibe. Ny alika kely sasany dia mety hateraky ny maso manga, fa hihamaizina kosa ny maso rehefa mihalehibe ilay alika. Ity dia lisitry ny karazana azo atao ny mitazona ny lokony manga mandra-pahatongan'ny olon-dehibe na dia heverin'ny fari-pahaizana fa ratsy izany. Indraindray ny alika dia hanana maso manga roa, na maso manga iray monja. Afangaroy ny alika miteraka izay manana maso volomparasy manana maso manga amin'ny andalan-dry zareo dia mety hanana maso manga.
Fikarohana amin'ny sokajy
Alika Indiana Amerikanina
Alika Razorback Kambodziana
Alika Leoparda Catahoula
Sheepdog anglisy taloha
Mpiandry aostralianina kilalao
'Ruby ilay volontsôkôlà sy fotsy fotsy 2 taona Border Collie misy maso manga sy maso volontany. Tiany ilay kilalao Andriamatoa Squeaks sy krema nokapohina !! '
'Trixie no manana maso tsara tarehy indrindra hitako. Izy dia 15 lbs (6.8 kg) amin'ny 5 volana ary mifangaro Terrier. Tiany ny milalao ary afaka mitsambikina tongotra efatra amin'ny rivotra. Eto amin'ity sary ity dia nanana fotsiny izy mandro ary nilalao nandritra ny adiny 2 mahery. Fantany izao fa alohan'ny hatory io. Noraisinay izy tamin'ny 4 volana sy tapany ary izy poti voaofana . '
'Ity ny ahy American Bulldog antsoina hoe Sky. 13 volana izy amin'ity sary ity ary milanja 31 kilao (31 kg.) Ary 61 sm (61 cm.) Ny haavony. Fotsy indrindra izy miaraka amina toerana boribory lehibe iray ao ambadiky ny sorony ankavanana ary amina andiany kely iray manontolo. Manana maso manga iray sy maso volontany iray koa izy. Ny toetrany dia tena sariaka sy milalao. Izy tia ankizy SY alika hafa . Rehefa mientanentana izy dia mampanenjana ny vodiny mihoatra ny rambony. Tiany ny matory amin'ny lohany amin'ny ondana ary sarona lamba firakotra. Mahafatifaty tokoa izy nefa mitroka mafy be. Ny hany fahazaran-dratsiny amin'izao dia ny mbola fitsakoana zavatra sasany indraindray. Mahazo be dia be izy FANAZARAN-TENA any an-tokotany ary mankany amin'ny valan-javaboary.
'Ity i Duece toy ny alika kely. Izy dia ChiWeenie . Duece no Open teraka , ka io no anarany hoe Duece. Ny reniny dia mainty sy fotsy Chihuahua ary ny dadany dia miloko harafesina Dachshund . Alika mivoaka i Duece. Tiany ny mifampiraharaha amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana, ary hikorisa anao izy hahasarika ny sainao! Izy dia mahazo ny masony manga avy amin'ny dadany, Sammy, ary ny fofona fohy avy amin'ny reniny, Mya. Duece dia iray amin'ireo zanany kely enina avy amin'ny fako. Tia sy malemy fanahy izy, toy ny dadany ihany. '
'Ity no vavy 2 taona, mainty sy fotsy loksamborgisy misy maso manga iray ary maso volontsôkôlà iray. Tena marani-tsaina izy ary vonona hiasa sy hianatra na inona na inona, amin'ny fotoana rehetra. Muddy Pawz Secret an'ny Rip Roarin no anarany. AKA 'tsiambaratelo' '
Lisitry ny alika madiodio mifangaro amin'ny ...
Lisitry ny alika misy lela mainty
mpiandry ondry alemana st bernard mix
asehoy ahy ny sarin'ny schnauzer kely
lab mainty australian omby omby mifangaro
pitbull alika herinandro 10 taona
sarin'ny alika ridgeback rhodesianina